Tora '404 - Isina Kuwanikwa' paunenge uchiedza kutora
kosha Tora '404 - Isina Kuwanikwa' paunenge uchiedza kutora
11 mwedzi 1 vhiki yapfuura #932 by MTR1768
Ndakaedza kutora mahwanda pa:
Apo ini ndakakunda bhatani rekuda iwe waedza kuuya pano:
uye ini ndinowana '404 - Isina Kuwanikwa'.
Chii chandingaita kuti ndiite?
11 mwedzi 1 vhiki yapfuura #933 by DRCW
A 404 kukanganisa kunogona kuva zvikonzero zvakawanda. Iwe unogona kuva nechinetso neeshandi yako kana Rikooo angangodaro ari kushanda paavo. Iwe unogona kunge uine hukuru hwekubatanidza. Iwe unogona kuva neine malware inobatanidzwa. Ndinokurudzira kushandisa malwarebytes. Iko kusunungurwa kwepachena uye unowana mazuva 15 ekusununguka kushanda kwakakwana. Ndanga ndichiri kushandisa kwemakore 4, uye hapana chinopinda. Paunenge uchitsvaga scan, edza uye teerera zvinyorwa zvakare.